Wararka - Kala soocida qabqablaha hillaaca.
Waxaan ka caawinnaa adduunka inuu koro ilaa 2004
Taageerada Wicitaanka 0086-18967751149
Taageerada Email leo@anhelec.com
Qalabka Korontada Korontada
250A Qalabka Cable
Xidhiidhiyaha Qabashada Xusulka
Qabqablaha hillaaca Qaybta firaaqada
qalabka qabashada hillaaca
Tube Shrinkable Kulayl leh
Tube Qaboojin Ah
LV Taxanaha Tube Iska Gaab
Qaybaha Beddelka Beddelka Suunka
Mitir Wixii Transformer
Qaybaha Kale ee Dheeraadka ah ee loogu talagalay Beddel
Beddelka Hadda iyo Suurtagalnimada
10kV Beddelka suurtagalka ah
20-35kV Beddelka Hadda
Nooca Busbar Beddelka Hadda
Fiyuuska Taxanaha Beddelka Awoodda Leh
Is-beddelka Awoodda leh ee Dusha-ku-rakiban
Qeybta MV Switchgear
Farsamaynta Hawlgalka Qaybta Weyn
Vacuum Circuit Breaker oo leh Kalsooni
Ring Ring Unit Main Loadbreak Switch
Dhex -dhexaadiyaha Vacuum
Qaybta Giraanta Qaybta Dheeraadka ah
Ka -tagista Fiyuuska Goosashada
Kala soocida qabqablaha hillaaca.
Waxaa jira noocyo badan oo qabqablayaasha hillaaca ah, oo ay ku jiraan kuwa qabta xabagta birta ah, kuwa xira xabagta birta birta ah, kuwa aan xadka lahayn ee xabagta birta xambaarsan, jaakad ka samaysan jaakad isku jirta oo dhammaystiran oo qabatayaasha xabagta biraha, iyo qabqablayaasha la saari karo.
Noocyada ugu waaweyn ee qabqablayaasha waa qabqablayaasha tuubbooyinka, kuwa xira waalka iyo kuwa xabagta xabagta. Mabda'a shaqada ugu weyn ee nooc kasta oo qabqablaha hillaaca wuu ka duwan yahay, laakiin nuxurkooda shaqayntu waa isku mid, dhammaantoodna waxay ka ilaalinayaan xadhigga isgaadhsiinta iyo qalabka isgaadhsiinta inay waxyeello gaadhaan.
Xiritaanka tuubada ayaa dhab ahaantii ah farqi ilaalin leh oo leh awood bakhtiinta qaansada sare. Waxay ka kooban tahay laba god oo taxane ah. Hal farqiga ayaa ku jira jawiga, oo la yiraahdo farqiga dibadda. Hawsheeda ayaa ah inay go'doomiso danab shaqeynaya oo ka hortagto in tuubada waxsoosaarka gaasku ka gudubto tuubada. Midda labaad waxaa lagu gubay kororka awoodda soo noqnoqoshada awoodda; tan kale waxaa lagu rakibay tuubada hawada waxaana lagu magacaabaa farqiga gudaha ama farqiga bakhtiinta arc. Awoodda bakhtiinta arc -ka xireha tuubada waxay la xiriirtaa baaxadda awoodda soo noqnoqoshada awoodda ee joogtada ah. Kani waa qabqablaha hillaaca farqiga u dhexeeya, kaas oo inta badan loo isticmaalo ilaalinta hillaaca ee khadadka korontada.
Qaboojiyaha nooca waalka
Xiriyaha nooca-waalka wuxuu ka kooban yahay farqiga dhimbiillaha iyo ka-hortagga saxanka waalka. Maaddada ka -hortagga saxanka waalka waa carbide silikoon oo gaar ah. Resistor chip valve ka samaysan carbide silikoon wuxuu si wax ku ool ah uga hortagi karaa hillaaca iyo danab sare, wuxuuna ilaalin karaa qalabka. Marka ay jirto danab sare oo hillaac ah, farqiga dhimbiiluhu wuu dillaacaa, qiimaha iska caabbinta saxanka waalka ayaa hoos u dhacaya, oo hillaaca ayaa dhulka la soo geliyaa, kaas oo kabka ama qalabka korontada ka ilaaliya waxyeelada hillaaca hadda jira. Xaaladaha caadiga ah, farqiga dhimbiiluhu lama jabin doono, qiimaha iska caabbinta ee iska -caabbinta saxanka waalka ayaa sarreeya, taas oo aan saamayn doonin isgaadhsiinta caadiga ah ee khadka isgaadhsiinta.
Qaboojiye zinc oxide
Qabqablaha hillaaca oksaydhka waa aalad ilaalin hillaac leh wax qabad ilaalin oo ka sarreeya, culays fudud, iska caabbinta wasakhda iyo wax qabad deggan. Waxay badiyaa adeegsataa astaamaha volt-ampere ee aan tooska ahayn ee volt-ampere ee zinc oxide si ay uga dhigto kan hadda maraya qabqablaha mid aad u yar (microamp ama heerka milliampere) oo ah danab caadi ah oo shaqeynaya; marka hawsha xad -dhaafka ahi kacdo, iska -caabbintu si aad ah ayay hoos ugu dhacdaa, iyada oo ka baxaysa Tamarta xad -dhaafka ah si loo gaadho saamaynta ilaalinta. Farqiga u dhexeeya qabqablaha noocaan ah iyo qabqablaha dhaqanka ayaa ah inuusan lahayn wax dheecaan ah oo adeegsada astaamaha aan tooska ahayn ee oksaydhka zinc si uu u soo baxo oo u jebiyo.
Dhowr qof oo hillaaca qabta ayaa kor lagu soo bandhigay. Nooc kasta oo qabqabte wuxuu leeyahay faa'iidooyin iyo astaamo u gaar ah. Waxay u baahan tahay in loo isticmaalo deegaanno kala duwan si loo gaaro saamayn ilaalin hillaac.
Waqtiga dhejinta: Sep-29-2020
Cinwaanka: No.217, Wadada Wei12, Aagga Horumarinta Dhaqaalaha Yueqing, Magaalada Yueqing, Gobolka Zhejiang, Shiinaha
Xeerarka Hawlgalka ee Gudbinta Awoodda ...
6KV Beddelka Danab ee Sare
Waa maxay shaqada terminaalka fiilada?
Teknolojiyadda Sensor Waxay Magaalooyinka Ka Dhigtaa Smart
Shan xirfadood oo naqshadeyn iyo tilmaamo farsamo ...